နောက်ခံပုံများ, ကုလားထိုင်များနှင့်အလှဆင်စသည်တို့များအတွက်ဖောင်းကြွပန်းပွင့် PVC ဒြပ်သားရေထည် - တရုတ် Ningbo Ruifeng ပလတ်စတစ်
နောက်ခံပုံများ, ကုလားထိုင်များနှင့်အလှဆင်စသည်တို့များအတွက်ဖောင်းကြွပန်းပွင့် PVC ဒြပ်သားရေထည်
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 1500000 မီတာ /
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, D ကို / A, D ကို / P ကို, Western Union, PayPal ကစသည်တို့ကို
FOB Reference, PRICE: USD1.45-2.65 / မီတာ
ကျွန်တော်တို့သည်ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ဒြပ်သားရေစျေးကွက်မှ experence ၏ 15 နှစျကျြော '' ရှိသည်။
※အဆိုပါထုတ်ကုန်နောက်ဆုံးပေါ်လက်လှမ်းမီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျက်, BS စံချိန်စံညွှန်းများငါးတန်းမီးလျှံနှောင့်နှေး, မီးခိုးသိပ်သည်းဆနှင့်မီးခိုးအဆိပ်စမ်းသပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြတ်သန်းရတယ်။
item NO ။ Wallpaper leather RF0030
အမည် နောက်ခံပုံများ, ကုလားထိုင်များနှင့်အလှဆင်စသည်တို့များအတွက်ဖောင်းကြွပန်းပွင့် PVC ဒြပ်သားရေထည်
အထူ 0.7-1.0 မီလီမီတာ
စျေးနှုန်း USD1.45-2.65 / မီတာ
MOQ မီတာ 500
usage wallpaper, ဆိုဖာခုံ, ပရိဘောဂ, သဘာပတိကူရှင်ချုပ်, အလှဆင်စသည်တို့ကို
လက္ခဏာ ပွန်းပဲ့-Resistance, ရေစိုခံ, အနံ့, Anti-အနာ, Scratch Resistance စသည်တို့ကို
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစံချိန်စံညွှန်းများ လက်လှမ်းမီမှု, ROHS, PAHS, မာခ်-71, မီးခိုး Density, အဆိပ်စသည်တို့မီးခိုးဖြတ်သွား
ဥရောပ, အမေရိက, အာရှစသည်တို့ကို
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် 30-40 မီတာ / လိပ်, ပတ်ရစ်အားကောင်း PVC ရုပ်ရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအလိပ်။ လိပ်၏ဘေးထွက်အပေါ် shipping အမှတ်အသားနှင့်အရောင်ကဒ်။
ကြာမြင့်ချိန် 30% သိုက်ပြီးနောက် 15-20 လုပ်အားခဘဏ်ထံမှ L / C ကိုပေးဆောင်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိ
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း: ပင်လယ်နားမှာက / လေကြောင်းခရီးဖြင့် / အမြန်အားဖြင့်
1. ) လက်လှမ်းမီမှု, မာခ်-71, ROHS, Phthalate အခမဲ့နှင့်အခြားသောအပါအဝင်အကြီးစားသတ္တုနှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန် 'အရည်အသွေးတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ် ";
2. ) မကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ပေးပို့အချိန်နှောင့်နှေး၏အမှု၌အပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေ "ဘေးကင်းလုံခြုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ငွေနှင့်အတူ";
3. ) သင်အဘို့နှင့်ငါတို့အဘို့အ "အချိန်ကိုရွှေက" ကျနော်တို့အချိန်တိုအတွင်းကောင်းတဲ့အရည်အသွေးမြင့်အောင်နိုငျသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအလုပ်ရှိသည် ဖြစ်. ,
4. ) Customer Service ကသင်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အနမူနာအညီပေးနိုငျသညျ။
Q6 ။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်
Q7 ။ ပေးပို့သင့်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုကဘာလဲ?
Q8 ။ ကုန်သွယ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကိုကဘာလဲ?
ယခင်: Hot ဂျင်းဘောင်းဘီပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအဘို့အပြောင်းလဲမှုကိုအရောင်နှင့်အတူပူးဒြပ်သားရေ, မှတ်စုစာအုပ်စသည်တို့ကိုထွင်း / တံဆိပ်ထု
နောက်တစ်ခု: 1.4mm လက်လှမ်းမီ PVC ဖိနပ်သားသမီးတို့အဘို့ nonwoven ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်အတူအထက်သားရေ
European Standard PU Water Base Solvent Free Le...
REACH and Envinoment Friendly Food Grade Odorl...
ba များအတွက် retro စတိုင်နှင့်အတူငါးမန်းစပါးကို PVC သားရေ ...
Excellent ကအရည်အသွေးကို PVC nonwoven အထည်သားရေ,f...
ခနှင့်အတူဥရောပစျေးကွက်တစ်ပိုင်း Pu အတုသားရေ ...